Ayar Myanmar Unicode Group « Ayar Unicode Group | Upgrade your life. with Myanmar character encoding, normalization, character code charts, character properties, collation.
Converter bookmark (drag to bookmark bar): Ayar to Zawgyi & Zawgyi to Ayar.
သူ​တို့​အ​ြမင်၊ သူ​တို့​အ​ေတွး​Contact ဆက်​သွယ်​ရန်
Ayar Myanmar Fonts ဧ​ရာ ြမန်​မာ​စာ​လံုး​များ​Typefaces ဒီ​ဇိုင်း​အ​ြပင်​အ​ဆင်
Download Page ရ​ယူ​ရန်
Installer CD ဧ​ရာ​စီ​ဒီ​ေခွ
ဧ​ရာ​ြမန်​မာ​ယူ​နီ​ကုဒ်​သံုး​စွဲ​သူ​များ​အ​တွက် လွယ်​လင့်​တ​ကူ​အ​ချက်​အ​လက်​ရှာ​ေဖွ​ရန်၊ ေမး​ြမန်း​ရန်​နှင့် အ​ြခား​သိ​လို​သည့် အ​ချက်​အ​လက်​များ​အ​တွက်​ဖန်​တီး​ေပး​ထား​သည့်​ေန​ရာ​ြဖစ်​ပါ​သည်။
Ayar Tutorial VDO
ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုဒ် စာ​လံုး​အ​တွက် သိ​သင့်​သိ​ထိုက် လို​အပ်​မည့် သိ​ေကာင်း​စ​ရာ​များ​အ​တွက် အ​ေကာင်း​ဆံုး​ြဖစ်​ေအာင် စီ​မံ​ဖန်​တီး​ထား​သည့် ရုပ်​သံ​မှတ်​တမ်း ဗီ​ဒီ​ယို​များ​စု​စည်း​ေပး​ထား​ရာ​ေန​ရာ​ြဖစ်​သည်။
ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုဒ်​အ​ဖွဲ့​သည် ဧ​ရာ​ြမန်​မာ​ယူ​နီ​ကုဒ်​စာ​လံုး​များ​အ​သံုး​ြပု​မည့် အွန်​လိုင်း​စာ​မျက်​နှာ​များ​အ​တွက် အ​ေကာင်း​ဆံုး​နှင့် အ​ထိ​ေရာက်​ြဖစ်​ေအာင် ကူ​ညီ​ေဆာင်​ရွက်​ေပး​ေန​ပါ​သည်။
On Windows’ Chrome Browzer
On Mac’s Mozilla Firefox
On Mac OSX’s Pages
On Mac OSX’s Final Cut Pro
On Ubuntu OpenOffice.org impress
On Android 1.6
On Amazone Kindle
ြမန် မာ ယူ နီ ကုဒ် ?
ယူ​နီ​ကုဒ် အက္ခ​ရာ​စ​နစ်​သည် ဗ​မာ​စာ​နှင့် ြမန်​မာ​တိုင်း​ရင်း​သား စာ​များ အ​ပါ​အ​ဝင် ေခတ်​သစ် နိုင်​ငံ​တ​ကာ စာ​ေပ​ေရး​ထံုး​စ​နစ် အ​သစ် ြဖစ်​သည်။ ဤ​စ​နစ်​အ​ရ ြမန်​မာ​အက္ခ​ရာ​များ​ကို Universal Character Set ဟု​ေခါ်​ေသာ ကမ္ဘာ​သံုး အက္ခ​ရာ​ဇ​ယား​တွင် အ​တိ​အ​ကျ ေန​ရာ​ချ​ထား​ြပီး ြဖစ်​သည့်​အ​တွက် ဤ​စ​နစ်​ကို လိုက်​နာ​ပါ​က ြမန်​မာ​အက္ခ​ရာ​များ​သည် နိုင်​ငံ​တ​ကာ အက္ခ​ရာ ေရး​ထံုး​စ​နစ်​တွင် အံ​ဝင်​ေစ​သ​ြဖင့် စံ​လွဲ​သည့် ြပ​ဿ​နာ​များ မ​ရှိ​နိုင်​ပါ။ ဥ​ပ​မာ​အား​ြဖင့် ကွန်​ပျူ​တာ ြဖင့် စာ​စီ​ရာ​တွင်​ြဖစ်​ေစ၊ စာ​လံုး​ေြပာင်း​ရာ​တွင်​ြဖစ်​ေစ စာ​လံုး​အ​ရွယ်​နှင့် အ​ထား​အ​သို​များ မှန်​ကန်​ေစ​ြခင်း၊ ကွန်​ပျူ​တာ​စ​နစ်​ြဖင့် သို​မှီး​ထား​ေသာ အ​ချက် အ​လက်​များ​ကို စ​နစ်​တ​ကျ ြပန်​လည်​ရှာ​ေဖွ​ရန် လွယ်​ကူ​ေစ​ြခင်း၊ အင်​တာ​နက် သံုး​စွဲ​ရာ​တွင် ေဖာင့််​စ​နစ်​များ ညီ​ညွတ်​သ​ြဖင့် စာ​လံုး​များ​ကို မှန်​ကန်​စွာ ြမင်​ရ​ြခင်း စ​သည့် အ​ေထာက်​အ​ကူ​များ ရ​ရှိ​မည် ြဖစ်​ပါ​သည်။
ဧ ရာ ြမန် မာ ယူ နီ ကုဒ်?
ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုဒ် စာ​လံုး​များ​သည် ေနာက်​ဆံုး​ထွက် နိုင်​ငံ​တ​ကာ​ယူ​နီ​ကုဒ်​စ​နစ် ၆.​၀ အ​တိုင်း အ​ေြခ​ခံ​ကာ​ြပု​စု​ထား​ေသာ စာ​လံုး​များ ြဖစ်​ြပီး၊ ဤ​စာ​လံုး​များ ြဖစ်​ေပါ်​ေရး အ​တွက် ြပည်​တွင်း​ြပည်​ပ​ရှိ ြမန်​မာ​ယူ​နီ​ကုဒ် ပ​ညာ​ရှင်​များ၊ ြမန်​မာ​ဂ​ရပ်​ဖစ်​ဒီ​ဇိုင်း ပ​ညာ​ရှင်​များ​နှင့် တိုင်း​ရင်း​သား​ယူ​နီ​ကုဒ် စာ​လံုး​များ​ကို ေလ့​လာ​ေန​ေသာ ထိုင်း​နိုင်​ငံ ချင်း​မိုင်​တက္က​သိုလ်​ရှိ ပ​ညာ​ရှင်​များ​က ပူး​ေပါင်း​၍ ြကိုး​ပမ်း​ခဲ့​ြက​ြခင်း ြဖစ်​သည်။
ယ​ခု ထုတ်​ေဝ​ေသာ ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုဒ် စာ​လံုး​သည် အင်​တာ​နက်​တွင် အ​ဓိ​က​အ​သံုး ြပု​ရန်​အ​တွက် ရည်​ရွယ်​ထုတ်​ေဝ​ေသာ စာ​လံုး​ြဖစ်​သည်။ ကွန်​ပျူ​တာ​ြဖင့် စာ​စီ​ရာ​တွင် အ​သံုး​ြပု​ရ​မည့် ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုဒ် ပင်​မ​စာ​လံုး (body text နှင့် ဧ​ရာ-​တန်​ခူး (heading၊ ဧ​ရာ-​ဂျူ​နို၊ ဧ​ရာ-​န​ဒီ စ​ေသာ မူ​ကွဲ​စာ​လံုး​များ​ကို များ​မ​ြကာ​မီ ထုတ်​ေဝ​သွား​နိုင်​ရန် အ​တွက် ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုဒ် အ​ဖွဲ့​သား​များ​က ဆက်​လက် အား​ထုတ်​လျက် ရှိ​ပါ​သည်။ ထို့​ြပင် ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုဒ် အုပ်​စု​ဝင် တိုင်း​ရင်း​သား စာ​လံုး​များ​ကို​လည်း မ​ြကာ​မီ ထုတ်​ေဝ သွား​ရန် စီ​စဉ်​ထား​ပါ​သည်။
ဤ ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုဒ် ြမန်​မာ​စာ​လံုး​တို့​ကို စီး​ပွား​ေရး​အ​ရ ဖန်​တီး​ခဲ့​ြခင်း မ​ဟုတ်​ပဲ၊ လွတ်​လပ်​ေသာ နည်း​ပ​ညာ​ရင်း​ြမစ် open source အ​ြဖစ်​သာ ဖန်​တီး​ထား​ြခင်း ြဖစ်​ပါ​သည်။ ထို့​ေြကာင့် ဤ​စာ​လံုး​များ​ကို ဧ​ရာ​အ​ဖွဲ့​၏ ခွင့်​ြပု​ချက်​ြဖင့် မည်​သူ​မ​ဆို လွတ်​လပ်​စွာ ထပ်​ဆင့် ြပု​ြပင် ဖန်​တီး​နိုင် ြက​ပါ​သည်။
ေဝ​ဖန် အ​ြကံ​ြပု​ချက် ေဆွး​ေနွး​ချက်​များ​အား ြကို​ဆို​လျှက် -
ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုဒ်​အ​ဖွဲ့၊ ၂​၀​၀​၉ ခု​နှစ်။
ေရှ့ လုပ် ငန်း စ ဥ် ?
၁။ OSX Keyboard Input Method.
MAC ကွန်​ြပူ​တာ​အ​တွက် ြမန်​မာ​စာ​လုံး​များ ရိုက်​နှိပ်​နိုင်​ရန် တ​စိတ်​တ​ပိုင်း ေဆာင်​ရွက်​ြပီး​စီး​ေန​ြပီ ြဖစ်​ပါ​တယ်။ သို့​ေသာ်​လဲ mac မှာ​ရိှ​ေသာ ပ​ရို​ဂ​ရမ် အား​လုံး​အ​တွက် အ​ဆင်​ေြပ​ေြပ သုံး​စွဲ​နိုင်​ရန် လို​အပ်​ေန​သည်​များ​ကို ြဖည့်​စွက် ေရး​ဆွဲ​ေန​ပါ​သည်။
ယ​ခု​လက်​ရိှ ြပီး​စီး​ထား​သည့် အ​ဆင့်​တွင် စမ်း​သပ်​သုံး​စွဲ​လို​သူ​များ အ​ေန​ြဖင့် ဤ​ေန​ရာ​တွင် download (Mac OSX 10.4 and later လုပ်​၍ ရ​ယူ​နိုင်​ပါ​သည်။ ေလာ​ေလာ​ဆယ် Adobe Programs များ (Indesign, PhotoShop, Illustrator စ​သည်​ြဖင့် တွင်​သာ ရိုက်​နှိပ် သုံး​စွဲ​၍ ရ​နိုင်​မည် ြဖစ်​ပါ​သည်။
၂။ ဧ​ရာ ဂ​ရပ်​ဖစ် စာ​လုံး​များ​ယ​ခု ဧ​ရာ​စာ​လုံး (body text)​နှင့် ဧ​ရာ တန်း​ခူး (heading ထုတ်​လုပ်​ေပး​ထား​ပါ​သည်။ ေနာက်​မ​ြကာ​ခင်​မှာ ဧ​ရာ-​ဂျူ​နို (​ဂ​ရပ်​ဖစ် အ​လှ​စာ​လုံး နှင့် သ​တင်း​ေခါင်း​စ​ဥ်​များ အ​တွက် သင့်​ေလျှာ်​မည့် ဧ​ရာ-​န​ဒီ စာ​လုံး​များ ထွက်​လာ​ပါ​မည်။ ေနာက်​ထပ်​လဲ ဂ​ရပ်​ဖစ် အ​လှ စာ​လုံး​များ၊ အ​ြခား​ေခါင်း​စည်း စာ​လုံး​များ ေရး​ဆွဲ​ေန​ြက​ပါ​သည်။
၃။ က​ရင် ယူ​နီ​ကုဒ် စာ​လုံး​က​ရင်​စာ​လုံး​များ​နှင့် ပတ်​သက်​၍ ယ​ခင်​ရိှ​ခဲ့​ေသာ ASCII က​ရင်​စာ​လုံး​များ​ကို ယူ​နီ​ကုတ်​အ​ြဖစ် ေြပာင်း​လဲ ေရး​ဆွဲ​ေန​ြပီ ြဖစ်​ပါ​သည်။
၄။ ရှမ်း ယူ​နီ​ကုဒ် စာ​လုံး​ရှမ်း​ဘာ​သာ​နှင့်​ပတ်​သက်​၍ ရှမ်း​ဘာ​သာ စာ​ြကွမ်း​ကျင်​သူ​များ​နှင့် ညိှ​နိှုင်း ေန​ပါ​သည်။
၅။ မွန် ယူ​နီ​ကုဒ် စာ​လုံး​မွန်​ဘာ​သာ​နှင့်​ပတ်​သက်​၍ မွန်​ဘာ​သာ စာ​ြကွမ်း​ကျင်​သူ​များ​နှင့် ညိှ​နိှုင်း ေန​ပါ​သည်။
ရ ယူ ရန် နှင့် ေထာက် ကူ ြပု ?
http://add.ayar.co/ တွင် ေနာက်​ဆံုး​ထွက်​ရှိ​ထား​သည့် အင်​စ​ေတာ်​လာ​များ၊ ပ​လပ်​အင်​များ၊ အယ်​ဒီ​တာ​များ​ကို တ​ေန​ရာ​ထဲ​တွင် လွယ်​လင့်​တ​ကူ ရ​ရှိ​ေစ​ရန် န​မူ​နာ​ရုပ်​ပုံ​များ၊ ဗီ​ဒီ​ယို​များ​ြဖင့် စု​စည်း​ေဖါ်​ြပ​ေပး​ထား​ပါ​သည်။
ဘာ​ေတွ​လို​မ​လဲ။ How it work?
လက် စွဲ စာ အုပ် ကီး ဘုတ် ပံု စံ သံုး သူ ေတွ ဘ ေလာဂ် ဒီ ဇိုင်း များ ေထာက် ကူ ြပု ကိ ရိ ယာ
Ayar User Guide လက်​စွဲ​စာ​အုပ်​သည် ဧ​ရာ​စာ​လံုး​အ​သံုး​ြပု​မည့်​သူ​များ​အ​တွက် အ​လွယ်​ကူ​ဆံုး​အ​ထိ​ေရာက်​ေရာက်​ဆံုး​ြဖစ်​ေအာင် စီ​မံ​ေပး​ထား​သည့် လမ်း​ညွှန်​တ​ခု​ြဖစ်​သည်။
Ayar User Guide လက်​စွဲ​စာ​အုပ်​တွင် ရှင်း​လင်း​ချက်​အ​ေသး​စိတ်​ကို ရုပ်​သံ​မှတ်​များ​နှင့်​တ​ကွ လွင်​လင့်​တ​ကူ နား​လည်​ေစ​နိုင်​ရန် အ​ေကာင်း​ဆံုး ဖန်​တီး​ေပး​သည် မှတ်​တမ်း​တ​ခု​လည်း​ြဖစ်​သည်။
ရ​ယူ​နိုင်​မည့် လိပ်​စာ​မှာ http://goo.gl/Nu21B မှာ​ြဖစ်​ပါ​သည်။
ဧ​ရာ​ြမန်​မာ​ယူ​နီ​ကုဒ်​မှ ဖန်​တီး​ထား​သည့် ြမန်​မာ၊ က​ရင်၊ က​ရင်​နီ၊ က​ယား​လီ၊ မွန်၊ ပ​အိုဝ်,​နှင့် ရှမ်း​ဘာ​သာ​တို့​အ​တွက် အ​ေကာင်း​ဆံုး၊ အ​လွယ်​ကူ​ဆံုး အ​ြမန်​ဆံုး၊ အ​မှား​အ​ကင်း​ဆံုး​ြဖစ်​ေအာင် စီ​စဉ်​ဖန်​တီး​ေပး​ထား​ပါ​သည်။
http://user.ayar.co/ မှာ ဧ​ရာ​သံုး​စွဲ​သူ​သူ​ေတွ​ကို တတ်​နိုင်​သ​ေလာက် သက်​ဆိုင်​ရာ​အ​မျိုး​အ​စား​အ​လိုက် စု​စည်း​ေပး​ထား​ပါ​တယ်။ မိတ်​ေဆွ​တို့​သိ​ရှိ​ထား​သည့် ဧ​ရာ​ြမန်​မာ​ယူ​နီ​ကုဒ်​ဆိုဒ်​ေတွ​ရှိ​ရင် ြပန်​လည်​မျှ​ေဝ​ေပး​ဖို့ ဖိတ်​ေခါ်​ပါ​တယ်။ contact form ဆက်​သွယ်​ရန်​ေန​ရာ​က​ေန​ြဖစ်​ေစ၊ အီး​ေမလ်း​က​ေန ေပး​ဖို့​မယ် ဆို​ရင်​လိပ်​စာ​က WEB@ayarunicodegroup.org သို့ ေရး​သား​ေပး​ပို့​ြက​ဖို့ ဖိတ်​ေခါ်​လိုက်​ရ​ပါ​တယ်။
http://ready.mmblogpress.org/ မှာ အ​သင့်​သံုး​နိုင်​ေအာင်​ြပင်​ဆင်​ေပး​ထား​သည့် ဘ​ေလာဂ်​ဒီ​ဇိုင်း​များ​ကို အ​ခ​မဲ့​ရ​ယူ​အ​သံုး​ြပု​နိုင်​ပါ​သည်။ မိ​မိ​အ​လို​ရှိ​ရာ ဘ​ေလာဂ်​ဒီ​ဇိုင်း​များ​ကို WEB@ayarunicodegroup.org သို့​ဆက်​သွယ်​ေပး​ပို့​နိုင်​သည်။
သ​ရုပ်​ြပ​ပံု​များ​ဧ​ရာ​လို​ဂို​များ​ြမန်​မာ၊ အဂင်္​လိပ်၊ ြမန်​မာ အွန်​လိုင်း အ​ဘိ​ဓာန်
Blogger သံုး​စွဲ​သူ​ေထာက်​ကူ​ြပု စာ​မျက်​နှာ
Ayar Text Tools Light Version
wordpress Ayar WebKit
phpBB Ayar Keyboards
Windows Keyboard font & Installer
Ubuntu ibus keyboard
Copyright © Ayar Myanmar Unicode Group, Privacy Statement Terms and Conditions. Powered by WordPress. Back to top